Mareykanka oo faah faahiyey duqeyn uu ka fuliyey Shabeellaha Hoose – Banaadir weyne
Kuunya-Barrow – War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu faah faahiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Ciidamada Mareykanka oo kaashanaya Saaxiibadooda Soomaaliya ay Maanta oo Bishu tahay 20 Agoosto ay duqeyn dhinaca cirka ah ka fuliyeen deegaanka Kuunya-Barrow oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana ay la beegsadeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Weerarkaas ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inay ku dileen Xubin ka tirsanaa Al-Shabaab, isla markaana weerarkaas ay ku taageerayeen Ciidamada Dowladda Soomaaliya ee dagaalka kula jira Ururka Al-Shabaab, sida uu sheegay Madaxa howlgallada Ciidamada Mareykanka ee Africa Gen. William Gayler.
Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay inay xaqiijiyeen in duqeyntaas ay ka fuliyeen deegaanka Kuunya-Barrow ee Gobolka Shabeellaha Hoose aysan wax ku noqon dad rayid ah.
Mareykanka ayaa sanadkaan 2019 waxa uu kordhiyey weerarada dhinaca cirka ah uu ka fuliyo Soomaaliya, isla markaana uu la beegsanayo Xarumaha Al-Shabaab iyo Daacish-ta ka Soomaaliya ee ka howlgasha deegaannada Puntland. – Baidoa News